पाँचौं रोग: निदान र उपचारको लागि अभिभावकको गाइड - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समाचार भारी खेल स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन औषधि जानकारी कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> बच्चाहरूमा पाँचौं रोग (पार्भो) कसरी पहिचान गर्ने र उपचार गर्ने
बच्चाहरूमा पाँचौं रोग (पार्भो) कसरी पहिचान गर्ने र उपचार गर्ने
अन्तहीन खोकी र छींक, नाकबाट बग्ने नाक, र अस्पष्ट खारिज बम्पहरू — बच्चाहरू जीवाणुहरूको लागि चुम्बक जस्तो देखिन्छ। हाम्रो अविभावकको बाल्यकालका बिरामीहरूको गाईडमा, हामी लक्षणहरू र उपचारहरूको बारेमा कुरा गर्दछौं जुन सामान्य अवस्थाको लागि हो। पूर्ण श्रृंखला पढ्नुहोस् यहाँ ।
पाँचौं रोग के हो? | लक्षण | निदान | उपचार | रोकथाम
वयस्कको रूपमा, मलाई पाँचौं रोग प्रतिरोधक क्षमताको लागि जाँच गरियो। डेकेयरमा काम गरिरहेको भए पनि मैले यसबारे सुनेकी थिइनँ। यो पत्ता लाग्यो कि म विगतको संक्रमणबाट मुक्त छु - मलाई (र मेरा आमाबुवाले) कहिले पनि थाहा पाइनन् कि मसँग बच्चाको रूपमा रहेको छ।
पाँचौं रोग बच्चाहरूमा धेरै सामान्य हुन्छ, र सामान्यतया हल्का, तर दुर्लभ अवस्थामा, यसले जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसो भए, पाँचौं रोगका लक्षणहरू जान्नु महत्त्वपूर्ण छ - र के गर्ने यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको बच्चामा यो छ।
पाँचौं रोग के हो?
पाँचौं रोग जसलाई एरिथेमा इन्फेक्कोसुम पनि भनिन्छ, बाल्यकालमा सामान्य र सामान्य हल्का रोग हो। यसलाई पाँचौं रोग भनिएको छ किनकि यो बाल्यावस्थाको रेश रोगको ऐतिहासिक सूचीमा पाँच नम्बर हो (बाँकी चार दादुरा, रुबेला, कुखुरा, र रोजोला)।
यो एक मानव parvovirus B19 संक्रमण को कारण हो। आइकन स्वास्थ्यका लागि मेडिकल योगदानकर्ता एमडी, लेन पोष्टन भन्छिन्, धेरै बच्चाहरू पार्भोभायरस बी १ to का एन्टिबडीहरू पर्दाफास हुन्छन् र विकास गर्छन्।
पाँचौं रोग बच्चाहरू र वयस्क दुबैमा संक्रामक छ, तर यो अधिक सामान्य हो बच्चाहरू to देखि १ children वर्ष । वयस्क जो पछाडि पाँचौं रोग संक्रमण भएको छैन र को बच्चाहरु संग काम (जस्तै बाल हेरचाह प्रदायकहरू र शिक्षकहरु ) यसलाई समात्ने उच्च जोखिममा पनि छन्।
कसरी बच्चालाई पाँचौं रोग हुन्छ?
पाँचौं रोग संक्रमित व्यक्तिको थोपाबाट फैलिन्छ (बोल्ने, छींकने, खोकी, लार इत्यादिबाट)। यो रगतको माध्यमबाट पनि सार्न सकिन्छ, आमाबाट भ्रुणमा पनि। गम्भीर जटिलताहरू अधिकांश गर्भावस्थामा पाँचौं रोगबाट प्रभावित हुँदैन, र पाँचौं रोगबाट भ्रुणको मृत्यु विरलै हुन्छ।
पाँचौं रोग संकुचन वा मा फैलिन सकिन्छ बर्षको कुनै पनि समय , तर प्रकोपहरू अधिक सामान्य हुन जान्छन् जाडो र वसन्त । पाँचौं रोग सामान्यतया गम्भीर हुँदैन। पाँचौं रोग भएका धेरै व्यक्ति या त एसिम्प्टोमेटिक वा हल्का लक्षणहरू भएको बताउँछन् सोमा मण्डल , MD र बोर्ड प्रमाणित इंटर्निस्ट मा शिखर सम्मेलन मेडिकल समूह । धेरै व्यक्तिहरू केहि हप्तामा निको हुन्छन्।
गैर मधुमेह बच्चा को लागी सामान्य रक्त शर्करा दायरा
किनभने पाँचौं रोगले असर गर्न सक्छ कसरी शरीर रातो रक्त कोशिका बनाउँछ , यो एक सम्झौता प्रतिरक्षा प्रणालीको साथ मान्छे को लागी गम्भीर हुन सक्छ, जस्तै HIV वा ल्यूकेमियाका साथ मानिसहरु, वा मानिसहरु का प्रकार जुन सिकल सेल रोग सिकल सेल एनीमिया जस्तै।
पाँचौं रोगका लक्षणहरू
पाँचौं रोग संकुचन पछि, इनक्युबेशन अवधि हो लगभग दुई हप्ता लक्षण देखा पर्नु अघि चिसो दाग देखा पर्नुभन्दा पहिले यो चिसो जस्तै लक्षणहरू देखा पर्दा पहिलो चरणको अवधिमा यो अत्यन्त संक्रामक हुन्छ। एक पटक र्याश देखा पर्‍यो, अधिक व्यक्तिहरू अब संक्रामक छैनन् र गर्न सक्दछन् स्कूल जाऊ , डेकेयर, वा काम।
पाँचौं रोगको प्रारम्भिक लक्षण समावेश चिसो जस्तै लक्षणहरु को लागी पछिल्लो सातदेखि १० दिन , जस्तै:
जब ती लक्षणहरू हराउन थाल्छन्, पाँचौं रोग रेशको विकास हुन्छ। विशेषताहरु समावेश :
अनुहारमा चहकिलो रातो दाग त्यो थप्पड गाल जस्तो देखिन्छ (वयस्कहरू भन्दा बच्चाहरूमा अधिक सामान्य)।
शरीरमा खटिरा त्यो धडमा सुरु हुन्छ त्यसपछि हतियार, ढुocks्गा, र खुट्टामा सर्दछ। यो अनुहार खटिरा पछि आउँछ। यो अक्सर लेसलेस जस्तो देखिन्छ। यो थोरै उठेको छ र खुजली हुन सक्छ, विशेष गरी यदि यो खुट्टाको तलहरूमा देखा पर्दछ। जब यो फिक्का जान्छ, यसले एक लेस जैसा देखावट लिन सक्छ।
फोहर आउँछ र हप्ता सम्म जान सक्दछ, तर सामान्यतया एक देखि दुई हप्ता सम्म रहन्छ, डा। पोष्टन भन्छन्। यो हप्ता वा महिना पछि संक्षेपमा देखा पर्न सक्छ जब बच्चा न्यानो हुँदा, व्यायाम गर्दा, वा सूर्यमा समय खर्च गर्दछ।
महत्त्वपूर्ण नोट: र्यासको वर्णन प्राय: ती हल्का छालामा कसरी हेर्छन् भन्ने विशेषताद्वारा वर्णन गरिन्छ। छालाको अवस्था देखिन्छ गाढा छालामा फरक । दुबै अनलाइन र उपलब्ध छाला रेशाहरूको फोटोहरू चिकित्सा स्कूलहरूमा हल्का छालामा दाग देखाउँदछ। थप अनुसन्धान र संसाधनहरू आवश्यक छन् आमाबुवा र स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले यी चकनाहरू कालो छालामा कस्तो देखिन्छन् भनेर पहिचान गर्न।
सम्बन्धित: Question प्रश्न सोध्नुहोस् डाक्टरलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईं BIPOC हुनुहुन्छ भने
केही व्यक्तिले पनि अनुभव गर्छन् जोड़को दुखाई र सूजन , पॉलीआर्थ्रोपेथी सिंड्रोम भनिन्छ। यो लक्षण महिला, बुढो किशोर र वयस्कहरूमा बढी सामान्य हुन्छ (वयस्कहरूमा एक्लो लक्षण हुन सक्छ।) यो हात, घुँडा, कलाई, पायल, वा खुट्टामा देखा पर्दछ। जोड्ने दुखाइ प्राय: एकदेखि तीन हप्ता सम्म रहन्छ, र यसले सामान्यतया दीर्घकालीन समस्याहरूको कारण गर्दैन।
के तपाईले पाँचौं रोगको लागि डाक्टरलाई भेट्नु पर्छ?
डा। पोष्टन भन्छन्, जो कोही निदान स्पष्ट छैन, बिरामी देखिन्छ, वा जसको ज्वरो तल जाने छैन एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग परामर्श गर्नुपर्छ। १०..4 डिग्री एफ भन्दा बढि ज्वरोका लागि बाल चिकित्सालयमा १२ हप्ता भन्दा कमका बच्चाहरूलाई लिनुहोस्। २ बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूले १०4 डिग्री एफ भन्दा बढीको ज्वरोको लागि चिकित्सकलाई भेट्नु पर्छ जुन २ hours घण्टा भन्दा बढि जारी रहन्छ। डा। पोष्टनका अनुसार तीन दिन भन्दा बढि ज्वरोमा जो कोहीले पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई पेशेवर चिकित्सकीय सल्लाहका लागि हेर्नु पर्छ। यदि तपाईं वा तपाईंको बच्चाको संयुक्त सूजनको विकास हुन्छ भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हेर्नुहोस्। र यदि एक बच्चा सिकल सेल रोग छ र तपाइँले पाँचौं रोगको शंका गर्नुहुन्छ भने, बच्चाले प्रदायकलाई देख्नु पर्छ।
सम्बन्धित: कुन तापक्रमलाई ज्वरो मानिन्छ?
यदि लक्षणहरू एक महिना भन्दा बढी समयसम्म रहिरहन्छ भने, डाक्टरको भ्रमण गर्न सल्लाह दिइन्छ, डा। मण्डल भन्छन्। यदि तपाईंसँग प्रतिरक्षा वा रगत गडबडी छ र पाँचौं रोगको लक्षण छ भने, एक डाक्टरको भ्रमण सिफारिस गरिन्छ। उदाहरण को लागी, सिकल सेल एनीमिया साथ बच्चाहरु को लागी कुनै ज्वरो संग एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक को देख्नु पर्छ, विशेष गरी तिनीहरु पहेलो देखिन्छ भने। थप रूपमा, संयुक्त सूजनका साथ बच्चाहरू जो समयसँगै खराब हुँदै गइरहेको देखिन्छ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा जाँच गरिएको अमेरिकी पेडियाट्रिक्स एकेडेमीका अनुसार।
पाँचौं रोग सामान्य रूपमा एक सामान्य चिकित्सक, परिवार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, वा बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा निदान गरिन्छ। रक्त परीक्षणहरू उपलब्ध छन्, तर केहि परिस्थितिहरूमा मात्र गरिन्छ (जस्तै गर्भावस्थामा)। सामान्यतया, पाँचौं रोग अनुहार खट्नेको दृश्य निरीक्षणद्वारा निदान गरिन्छ।
जब नवीनतम हो म योजना बी लिन सक्छु
पाँचौं रोग उपचार
कुनै उपचार छैन जुन भाइरसलाई निको पार्छ जुन पाँचौं रोग सार्दछ। उपचार मात्र भाइरल संक्रमण को लक्षण राहत प्रदान गर्न को लागी हो।
पाँचौं रोग भएका अधिकांश व्यक्तिहरू उपचारविना नै निको हुन्छन्, डा। मण्डल भन्छन्। दुखाइ राहत [टायलनोल]एसिटामिनोफेन [वा आइबुप्रोफेन ] जोड्ने दुखाइ र फेभरको लागि लिन सकिन्छ।
एन्टीहिस्टामाइन्स दाग खुजली वा असहज छ भने राहत प्रदान गर्न सक्छ।
रक्तक्षेपण र गम्भीर व्यक्तिहरूका लागि अस्पताल भर्ना आवश्यक हुन सक्छ रक्ताल्पता ।
सम्बन्धित: बच्चाहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो पीडा रिलभर र बुखार कम गर्नेहरू
पाँचौं रोग रोकथाम
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरूको अनुसार (CDC), तपाईं सक्नुहुन्छ पाँचौं रोग रोक्नुहोस् एउटै तरीकाले तपाईले कुनै पनि अन्य भाइरसलाई समात्नबाट रोक्नुहुन्छ (जस्तो कि चिसो वा COVID-19):
साबुन र पानीको साथ बारम्बार हात धुने, प्रत्येक पटक कम्तिमा २० सेकेन्ड
खोकी र हाकिम ढाक्नुहोस्
तपाईंको अनुहार, नाक, आँखा, र मुख छोड्नुहोस्
बिरामी हुँदा घरमा बस्नुहोस्
बिरामीलाई बेवास्ता गर्नुहोस्
एकचोटि कसैलाई पाँचौं रोग भयो भने, उनीहरूले फेरि फेला पार्दैन, त्यसैले प्रायः वयस्कहरूले यसलाई समात्ने बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। केहि गर्भवती मानिसहरु जसलाई पाँचौं रोग छैन र बच्चाहरूसँग काम गर्नेहरू यदि उनीहरूको जागिरमा पाँचौं रोग देखा परेको छ भने, वा सावधानीको रूपमा आफ्नो गर्भावस्थाको अवधिको लागि घरमा बस्न रोज्छन्। पार्भो भाइरस संक्रमणले गम्भीर गर्भावस्थाको जटिलता निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले यदि तपाईं गर्भावस्थाको बखत पार्भो एक्सपोजर हुनुहुन्छ भने, आफ्नो प्रसूति चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। पाँचौं रोगलाई रोक्न कुनै खोप छैन।
पर्कोसेट बनाम भिकोडिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
13 वर्ष पुरानो आइबुप्रोफेन कति लिन सक्छ
के गर्ने जब बीपी घर मा उच्च छ
सेक्स पछि कति समय सम्म तपाइँ योजना बी गोली लिन सक्नुहुन्छ
के तपाइँ मेक्सिको मा एक नुस्खा चाहिन्छ?
जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्न कति खर्च लाग्छ